FOIBE FLM Archives - RADIO TENY FIAINANA
kanton’ny fanantenana: hanao hetsika amin’ny iray volan’ny saloma
sary tahiry: ireo katita kely antokom-pihiran’ny sekoly alahady
Isan’taona dia manana fahazarana mikarakara hetsika lehibe ry zareo avy ao amin’ny antoko-pihiran’ny sekoly alahady FLM 67ha « Kanton’ny fanantenana » izay fanaon’izy ireo isakin’ny iray volan’ny saloma.Amin’ity taona ity ary dia mitontona ny alakamisy faha 10 ny volana may izany,izay andro niakarana .Araka izany dia hisy antsam-piderana lehibe amin’io fotoana io manomboka amin’ny 2 ora tolakandro ao amin’ny FLM toby fanantenana 67ha ihany ; iarahana amin’ny : Kanton’ny fanantenana sy ny kerobima finoana FLM avatr’ankatso ary ry zareo avy ao amin’ny tanoran’ny faritra faha-fito izay miaraka aminy ao amin’ny FLM 67ha ihany . Izany no natao moa dia ho fiderana an’Andriamanitra manokana nohon’ny nitantanany ny antoko-pihira sy ny sampana.
JOBILY TONIA FIFIL NASIONALY
Efa mitsangana izao ny Komitin-Jobily ny Tonia FIFIL Nasionaly, Ka isan’ireo mpikamabana feno ao ny Biraon’ny Fifohazana SPAnta.
Marihina moa fa ny daty hanaovana ny fanokafana dia ny 01 Aogositra 2018, mandritra ny isataona Tobilehibe Anakaramalaza.
JOBILY FAHA 500 TAONA NY REFORMASIONA SY NY 150 FLM
Ho tanterahina eto Antananarivo SPAnta, ny famaranana ny Jobily faha 500 taona ny Reformasiona sy ny faha 150 FLM ny Asabotsy 26 May sy ny Alahady 27 May 2018 ho avy izao, izay dia ankalazaina amin’ny fomba hafakely izay tsy dia mbola fanaon’ny FLM loatra.
Ka ny fanatanterahana azy dia atomboka amin’ny fiarahana mivavaka ao amin’ny FLM Ambatovinaky ny Asabotsy maraina, avy eo misy ny fiaraha-misakafo ao amin’ny akan ho an’izay nasaina manokana ny amin’izay. Manak’izany dia misy ny fampiratiana ny tantaran’ny FLM sy ny Lutheranisme izay hatao eny anoloan’ny lapan’ny tanàna mandritry ny herinandro ny 22- 27 May. Ny tolakandro kosa dia Antsam-panahy lehibe izay atao ao Antsahamanitra izay iarahana amin’ny Sampana velona rehetra ato amin’ny sahan’ny FLM.
Ny Alahady kosa dia fiarahana mivavaka atao ao amin’ny Kianjaben’ny Mahamasina manomboka amin’ny 09 Ora, izay ialohavan’ny filaharana miainga amin’ny toerana Efatra izay mbola ho faritana, rehefa tapitra kosa ny fotoam-pivavahana dia misy ny sakafon-Jobily izay atao eny amin’ny FOFIKRI Ankadikely Ilafy, ka ho an’izay nadray anjara tamin’ny fividianana tapakila no mamonjy izay (misy ny fiara hitatitra ho an’ny tsy manana izany ).
Raha araka io fandaharam-potoana io, dia hiavaka tokoa izao fankalazana Jobily izao. Ny komity mpikarakara rehetra arak’izany dia tsy mitsahatra mivory ho entina handavorariana ny fivoriana masina ka isehoan’ny voninahitr’Andriamanitra. Samia isika miomana avokoa.